Muslimiinta iyo Yuhuudda Oo ka Horyimid Go’aan Maxkamada Yurub ku Mamnuucday Gowraca Xoolaha – Heemaal News Network
Maxkamadda caddaaladda ee midawga Yurub ayaa dowladda Belgium ku ayidday go’aan ay uga mamnuucday Muslimiinta iyo Yuhuudda inaysan gowrici karin xoolaha iyaga oo aan la suuxin.
Maxkamadda ayaa ku gacan seyrtay dalabka ururrada Muslimiinta iyo Yuhuudda ee ka soo horjeesaday go’aankasi.
Maxkamadda ugu sarreysa Midowga Yurub ayaa taageertay go’aanka dowladda Belgium ee ahaa in loo baahan yahay in la suuxiyo xoolaha ka hor inta aan la gowricin si loo dhawro xuquuqdooda.
Madaxa golaha wadaadada Yuhuudda ayaa sheegay in go’aankaasi uu dhibaato ku yahay Yuhuudda ku nool guud ahaan qaaradda Yurub.
Balse dowladda Belgium-ka ayaa soo dhaweysay go’aanka maxkamadda, waxaana wasiirka xannaanada xoolaha Ben Weyts uu sheegay in arrintani ay tahay mid taariikhi ah.
Kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda xayawaanka ee Gaia ayaa iyana dhankeeda maalinta uu go’aankani maxkamadda soo baxay ku tilmaantay maali weyn oo la soo gabagabeeyay dedaal soo socday muddo 25 sano ah.
Go’aanka maxkamadda ayaa lid ku ah soo jeedin ahayd in la laalo xukunkii horey loogu mamnuucay in xoolaha la gowraco iyaga oo aan la suuxin maadaama sharciga xakameynaya arrintaasi ay tahay in la ixtiraamo oo kaliya haddii uusan ku xad gudbeyn diimaha dadka kale.
Muslimiinta iyo Yuhuudda ayaa gowraca xoolaha iyaga oo aan suuxin balse middida lagu gowracayo ayay aad u afeeyaan.
Sharciga UK iyo kan Midowga Yurub ayaa dhigaya in xoolaha la suuxiyo ka hor inta aan la gowricin, waa haddii hilibkaasi aanan loogu tala gelin Muslimiinta iyo Yuhuudda.
Maxkamaddani reer Yurub ayaa sheegtay in dhammaan waddammada xubnaha ka ah Midowga Yurub ay tahay inay ixtiraamaan xuquuqda xayawaanka iyo xorriyadda diimaha, maadaama shuruucda reer Yurub aysan diideyn in la suuxiyo xoolaha ka hor inta aan la gowricin – waa haddii arrintaasi aysan xad gudub ku ahayn xuquuqda aasaasiga ahi ee dadyowga reer Yurub.
In kastoo maxkamaddu ay aqbashay in shuruudan ay xaddidayso xuquuqda Muslimiinta iyo Yuhuudda, haddana ma aysan mamnuucin gawraca la xiriira cibaadada iyo “faragelinta xorriyadda muujinta diinta” ee sharciga dalka Belguim, sharcigaasi oo maxkamaddu ay sheegay in uu waafaqsan yahay shuruucda Midowga Yurub ee ixtiraamayso daryeelka iyo xuquuqda xayawaanka.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in baarlamaanka gobollada woqooyi ee dalkaasi Belgium-ka uu dooddiisa ku saleeyay baaritaan cilmiyaysan oo muujinaya in qaabka ugu wanaasgan ee xoolaha loogu raaceyn karayo marka la gowracayo ay tahay in la suuxiyo ka hor inta aan la gowricin, si loo yareeyo xanuunka gowraca isla markaana sharciga gobolladaasi uu ogol yahay in la isu dheelitiro xuquuqda diimeed ee dadka iyo tan daryeelka xoolaha.
Ururrada Muslimiinta ayaa dhawr jeer oo hore ka hor yimid sharciyada gobolladaasi woqooyi ka hor inta aan sharciyadaasi si rasmi ah loo dhaqangelin bishii Janaayo ee sanadkii 2019.
Bilo kaddib waxaa iyagana sharcigaasi dhaqangeliyay gobollada ku yaal koonfurta dalkaasi oo looga hadlo luuqadda Faransiiska.
Menachem Margolin oo ah madaxa midowga ururka wadaaddada Yuhuudda ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in maanta oo ah Jimco ay tahay maalin murugo leh.
Sidoo kale dallada midowga ururrada Yuhuudda dalkaasi Belgium ayaa sheegtay in dacwad ka dhan ah go’aanakasi ay u gudbin doonto maxkamadda xaquuqul insaanka ee reer Yurub.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo Lagu soo Dhaweeyay Baydhabo.
Maamulka Hiiraan Oo ka Qayliyay Ciidamada Liyuu Booliska Oo Dad ka Qafaashay Gobolkaasi.
Raysal Wasaare Rooble Oo Kusoo Laabtay Muqdisho Iyo kana Hadlay Safarkiisii